“छल गर्नेलाई माफ गर्दिनँ” – Sourya Online
“छल गर्नेलाई माफ गर्दिनँ”
सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख २३ गते २:३३ मा प्रकाशित
जोन अब्राहम र विपाशा बसुको जोडीलाई बलिउडको सबैभन्दा ‘स्टेबल’ (स्थिर) जोडी मानिन्थ्यो । तर, यो जोडी पनि अन्तत: टिक्न सकेन । जोनले अर्कै केटीसँग विवाह गर्ने घोषण गरिसकेका छन् । विपाशाले यसलाई स्वीकार गरेकी छन् तर उनको कुरा सुन्दा लाग्छ कि उनी जोनसँगको प्रेमको धङ्धङीबाट अझै मुक्त हुन सकेकी छैनन् । भारतीय दैनिक पत्रिका ‘टाइम्स अफ इन्डिया’ मा प्रकाशित विपाशाको अन्तर्वार्ताको सारांश :
जोनले त बिहे गर्ने घोषणा गरे नि
मेरो स्मरणशक्ति कमजोर छ । तीन महिनाभन्दा अगाडिको कुरा म सम्झिन सक्दिनँ ।
जोनको निर्णयबाट खुसी हुनुहुन्छ ?
किन नहुनु † विवाह गर्ने निधो गर्नु राम्रो हो । उसलाई हार्दिक बधाई छ । तर मेरो सम्पर्क भएको छैन ।
तपाईंले चाँहि कहिले लगनगाँठो कस्ने नि ?
अहिले नै गर्दिनँ । विवाहका आवेदन दिनैपिच्छे पाइरहेकी छु (हाँस्दै) । तर, प्रेम नभइन्जेलसम्मका लागि त पर्खिनै पर्‍र्यो नि † माया बस्ने बेला भइसकेको छैन, यसका लागि केही समय चाहिन्छ । फेरि मलाई कुनै हतार पनि त छैन ।
अभिनेतासँग फेरि प्रेम गर्नुहुन्छ ?
कोसँग प्रेम हुन्छ भन्ने के थाहा ? प्रेम आपैँm हुन्छ । अहिले म आफ्नै काममा लागिपरेकी छु । म प्रगाढ सम्बन्धमा भएका बेला आई एम लिजेन्ड, पिंक पार्टनर–२ जस्ता राम्रा फिल्मका ‘अफर’ आएका थिए । तर, मैले वास्तै गरिनछु । त्यतिबेला मेरो प्राथमिकता अर्कै थियो । यसका लागि कसैलाई दोष दिन्न, सबै मेरै निर्णय थियो । भइगो, विगतका कुरा अब नसम्झौँ † दुई वर्षअघि भन्दा अहिले म बेग्लै भएकी छु । आइन्दा म राम्रा ‘अफर’ गुमाउँदिनँ ।
के भूपू ब्वाइफ्रन्ड साथी बन्न सक्छ ?
किन नसक्नु ? राम्रो साथी बन्न सक्छ । तर, केही समयपछि मात्रै । छल, कपट गर्ने र धोका दिनेलाई भने माफ गर्न गाह्रो हुँदो रै’छ । त्यस्तासँग वास्तविक मित्रता कहाँ सम्भव हुनु ?
के जोनले तपाईँसँग छल गरे ?
भै’गो, यसबारे नबोलौँ ।
के जोनको साथी बन्न सक्नुहुन्छ ?
थाहा छैन । तर, मैले माफ दिइसकेँ, ती दिन पनि बिर्सिसकेँ ।